> Resource > iPhone > Jidka A Free dib u soo ceshano fariimaha qoraalka ka kaabta iPhone
Waxaan dib u soo ceshano tirtiri karaa fariimaha kaga imaanayo iPhone oo bilaash ah?
Jawaabta xaqiiqdii waa HAA. Waxaad si toos ah ugu soo celin kartaa fariimaha qoraalka ah kaga imaanayo iPhone via Lugood. Ma uusan kaa qaadi bixinin. Afuufa tallaabooyinku:
• Isku aad iPhone in kombiyuutarka meesha aad gurmad iPhone caasimadii
• Run Lugood, iyo xaq-guji iPhone, ka dibna dooro "Soo Celinta ka kaabta"
• Waxaad arki doonaa "ayuu hore Synced" waqti iyo magaca iPhone
• Dooro file gurmad ah oo guji "Soo Celinta"
Hadda, dhammaan fariimaha in gurmad iPhone ayaa lagu soo celiyo si aad iPhone. Xogta kale ee sida xiriirada, sawiro, videos iyo ka badan ayaa sidoo kale la soo celiyo si aad iPhone waqti isku mid ah. Waxa aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa in dhammaan xogta ku saabsan iPhone bedeli doona gurmad iPhone ka dib markii uu dib u soo celinta. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad xog muhiim ah gurmad ka hor inta aadan tan sameyn.
Xulo soo kabsado fariimaha kaga imaanayo iPhone
Haddii aad rabto in aad sii xogta laga hayo on your iPhone oo aad rabto oo kaliya fariimaha ka iPhone gurmad, ma gurmad oo dhan, sidoo kale waxaa jira hab kale, laakiin ma mid lacag la'aan ah. Waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan qalab dhinac saddexaad sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) , kaas oo kuu ogolaanaya in aad soo saaro oo ku eegaan oo dhan ku jira faylka gurmad ah, oo waxaad soo kaban karto, wax kasta oo aad doonayaa ka.
Si kastaba, waxa ay ku siinaysaa version tijaabo ah. Waa maxay sababta aan lahayn marka hore isku day ah?
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka aad Xisaabiyaan, waxaa si toos ah ay maamulaan. Ha xiriiriyaan iPhone in computer marka aad taas samayn. Markaas raac tallaabooyinka hoose si aad saaro fariimaha kaga imaanayo iPhone.
Tallaabada 1. Dooro gurmad iPhone oo Macdan
Marka aad ordi barnaamijka on your computer, dooran hab kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee daaqadda. Markaas barnaamijka si toos ah u heli doonaa iPhone gurmad files on your computer. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan badhanka si ay u bilaabaan waxaa soo saarida.
Farriimaha qoraalka Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh oo ka soo kabsado gurmad iPhone
Marka ugu shishaysa scan, waxaad ka akhrisan kartaa dhammaan xogta aad gurmad iPhone, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, wac taariikhda, qoraalo, iwm dooro menu ee Messages . Waxaad ku eegaan karo faahfaahinta thread fariin kasta, oo ay ku jiraan waxyaabaha iMessage. Wixii ku lifaaqan, waxaad dooran kartaa fursad aad ku Lifaaq Message. Sax waxyaabaha aad rabto in aad soo kabsado, oo waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer adigoo gujinaya Ladnaansho .